Manampahaizana Momba Ny Politika Etazonia-Kiobà: Miresaka Ny “Fahasamihafàna Lalina” Eo Amin’ny Zon’Olombelona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Febroary 2015 2:57 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, עברית, Español
Fangon'ny “Cuba Posible” .
Ny Janoary lasa iny, nifamory tao Washington DC, Etazonia, ny andianà politisiana, diplaomaty, mpanao gazety, mpandraharaha, ary olon'ny anjerimanontolo Amerikana sy Kiobàna, mba hifanakalo hevitra momba ny famerenana indray ny fifandraisana eo amin'ny tany roa tonta. Ireo manampahaizana sy mpisolo vava mandray anjara ao anatin'ilay tetikasa Cuba Posible no nampiantso ilay vondrona — Cuba Posible dia sehatra Kiobàna fiadiana hevitra ara-politika — ary ny Cuba Research Center, fikambanana iray mpanao asa tsy ilàna tombony ao Etazonia.
Araka ny ambaran'ny kaonty Twitter ofisialin'ny “Cuba Posible”, tafiditra ho lohahevitra manana ny lanjany mandritra ilay konferansa ny “fifamatorana ara-diplaomatika eo amin'ny firenena roa tonta, ireo fanamby politika ankehitriny ao amin'ny nosy, ny fanatsaràna takian'ny dingana demaokratika ao Kiobà, ny fahombiazan'ny asa fanaovana gazety, ary ny zon'olombelona.”
@cubaposible #sociedadcivil, ireo fanamby demaokratika sy ara-toekarena ao #Cuba ary ny fandraisana anjaran'ireo zanaka am-pielezany; lohahevitra hodinihana any Washington
Ny Zon'Olombelona Ao Kiobà: fomba fijery iray sarotra
Iray amin'ireo lohahevitra sarotra indrindra sy mahabe resaka nandritry ny taompolo maro nifampiraharahàna teo amin'i Etazonia sy Kiobà ny olan'ny zon'olombelona. Nandritry ny resaka izay nanomboka tao Havana ny 22 Janoary, nilaza ireo solontena avy amin'ny firenena roa tonta fa mitohy mitàna ‘fahasamihafàna lalina’ momba io olana io ry zareo.
Ho an'i Michel Fernández, iray tamin'ireo mpandray fitenenana sady mpahay lalàna avy ao Havana, “ireo lohahevitra tahàka ny rafitra antoko tokana [sy] ny fameperana ny zo sivily sy politika, [mirona amin'ny] fanaingàna kiana hanohitra ny rafitra Kiobàna, ary na [ny fanaingàna fanontaniana raha tena] misy tokoa ny zon'olombelona ao Kiobà.”
Ny marina dia manana lamina araka ny lalàm-panorenana i Kiobà, manaiky ny ankamaroan'ireo zo misy amin'izao andro izao, miaraka amin'izay fitaovana iantohana azy ireny, ary ho amin'ny fiarovana ny zo dia mandray anjara ao anatin'ny rafitra iraisam-pirenena, izay mpisehatra ao anatiny koa i Kiobà, .
Saingy avy eo i Fernández nahatsapa fa “marobe amin'ireo zo voafaritra araka ny lalàm-panorenana (toy ny fahalalahana maneho hevitra sy ny asa fanaovana gazety, ny fifandraisan'ny fanjakàna sy ny fiangonana) manondro ireo lalàna ho fampiharana azy ireny, ary amin'ny tranga maro no tsy mbola voapetraka ireny lalàna ireny, noho izany, miatrika endrika zo hafahafa isika, izay tsy voafaritra mazava tsara ny fetrany sy ny endriky ny fampiharana azy ireny.”
Vao haingana, nandritry ny fanolorana ny tatitra fanao isan-taona avy amin'ny Human Rights Watch erantany, ilay tale Latino-Amerikana, Daniel Wilkinson dia niantso ireo firenena ao Amerika Latina hitaky amin'i Kiobà ny hanajàny ny zon'olombelona, ao anatin'izao ezaka fampihavanana an'i Etazonia sy Kiobà izao. Asongadin'ilay tatitra ny fitomboan'ireo famonjàna tsy an-drariny mandritry ny fotoana fohy an'ireo mpanohitra sy tsy miankina mpanao gazety ao Kiobà.
Roberto Veiga, iray amin'ireo mpanorina ny Cuba Posible, nilaza fa ” ny olan'ny zon'olombelona ao Kiobà dia lohahevitra iray ampidirin'ny olona maro ho toy ny fepetra iray amin'ny fandrafetana fifandraisana amin'ny andaniny sy ny ankilany (…). Kanefa, raha hanao izany, tsy maintsy raisintsika ho anaty kajikajy ny tontolo nateraky zava-nisy izay nanosika ho amin'izany. Raha tsy izany dia mety ho diso ny fitsarantsika ary ho sarotra [tadiavina] kokoa izay ho vahaolana goavana”
“Ny zava-misy dia rehefa tsy misy fotsiny an'ireo vato misakana nateraky ny rivo-piainana feno fifankahalàna teo amin'i Etazonia sy Kiobà, dia ho tratrantsika ny fahamarinan-toerana eto anatiny, izay ilaina hiatrehana amim-pahombiazana miaraka amin'ny fanamafisana ny fahalalahana, ny fisokafana ara-politika mifanaraka amin'izany ary ny fametrahana andrim-panjakana tsara fototra,” hoy i Veiga.
Lenier González, mpandrindra ny Cuba Posible, dia nanindry fa “ao Kiobà, lasa zavatra tsy maintsy ilaina ny fisian'ny Lalàna misy fileferana sy tsy manaraka fotsiny ny efa nisy momba ny resaka fikambanana, izay afaka handray ho anaty kajiny ny fahamaroana/fahasamihafàn'ny mpisehatra ao anatin'ny fiarahamonina Kiobàna. Ao anatin'ny endrika fitoniana izay iarahana amin'i Etazonia, ny governemanta Kiobàna dia manana fitsipika maoraly sy politika hipetraka ho mpiantoka izay rehetra fahamaroan-kevitra politika sy ideolojika ao amin'ny firenena.”
Ilain'ny adihevitra momba ny zon'olombelona ao Kiobà, miaraka amin'izany, ny famerenany mandinika lalina ny drafitra demaokrasia ao amin'ity firenena ity. Julio César Guanche, mpisolovava, mpikaroka sady mpikambana ao amin'ny Cuba Posible, nanipika ireo trosa mbola miandry:
ny fitakiana habaka lehibe kokoa araka ny lalàna sy ara-politika ho an'ny olom-pirena mba handraisany fanapahan-kevitra politika, ary hanarahany maso sy hiadiany hevitra mikasika izay efa misy, ary fifanotronana amin'ny fandrafetana ny zo, fanjakàna tàn-dalàna lehibe kokoa (…) ary ny zo hanohitra ny lalàna rehefa tsy ara-drariny ny fampiharana azy, ny fanapariahana amin'ny fomba demaokratika ny fahafahana mahazo fanànana, ary ny fampiroboroboana ny soatoavina sy ireo andrim-panjakana izay manome vàhana ny fampiharana ny fankatoavana sy ny fandeferana.
Tafiditra tao anatin'ny fandaharan'ny hetsika ihany koa ny fivoriana iray niarahana tamin'i Alex Lee, Sekretera lefitra misahana ny raharaha mahakasika ny faritra Amerika Andrefana.
Nandray anjara tamin'ity hetsika ity i Elaine Díaz, mpanoratra izao lahatsoratra izao, izay tsy azon'ny daholobe natrehana. Samy nanome ny fankatoavany daholo ireo olona rehetra voalaza ery ambony mba hotanisaina at amin'ny Global Voices.